Akụkọ - NTỤZỤ NTỤTA ỤBỌCHỊ NCHE EKPERE
Nkwakọba ihe usoro nri:
Ogwe nkwakọ ngwaahịa nri na -agụnye bọọdụ iko mkpuchi na -enweghị mkpuchi/akwụkwọ mkpuchi iko na -enweghị mkpuchi, otu ma ọ bụ okpukpu abụọ nke mkpuchi mkpuchi iko PE, nnukwu GC1 bọọdụ ọkwa nri/bọọdụ nri, bọọdụ nkwakọ ngwaahịa Liquid/LPB
AKWỤKWỌ CUPSTOCK UNCOATED/UNCOATED CUPSTOCK BASE PAPER
Uncoated cupstock board/uncoated cupstock base paper bụ ụdị ntekwasa board. Ọzọkwa mara dị ka cup paper.It bụ adịchaghị nkwakọ akwụkwọ mere si nri ọkwa isi paper.Food ọkwa akwụkwọ board.It bụ uncoated ma ọ bụ ụrọ ntekwasa otu side.it adabara Grammage zuru ezu bụ 170g, 190g, 210g, 220g, 230g, 250g, 270g, 300g, 330g, 350g. nkwakọ ngwaahịa.
ỤBỌCHỤ mkpuchi mkpuchi/igbe mkpuchi mkpuchi mkpuchi
Pee ntekwasa osisi/PE ntekwasa cupstock osisi bụ ụdị ntekwasa board. Makwaara dị ka cup paper.It bụ adịchaghị nkwakọ akwụkwọ mere si nri ọkwa isi akwụkwọ .Food ọkwa akwụkwọ board.It bụ PE ntekwasa na uncoated cupstock isi akwụkwọ. Ọ bụ dị mma maka ịme iko iko, nnukwu efere akwụkwọ. grammage zuru ezu bụ 170g, 190g, 210g, 220g, 230g, 250g, 270g, 300g, 330g, 350g. , nchịkọta nri eghere eghe dị ka igbe ọkụkọ eghere eghe, igbe hamburge, igbe ibe na igbe nri n'okporo ụzọ.FDA176.170 (ụkpụrụ ndị America maka akwụkwọ na mbadamba na kọntaktị nri)
EGO dị elu GC1 FO GRADE/Bọdụ NRI
GC1 nnukwu ọkwa ọkwa/bọọdụ nri bụ ụdị ihe mkpuchi. A makwaara dị ka bọọdụ nri.Ọ bụ akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa emere site na akwụkwọ ọkwa nri.Ọ bụ nnukwu ngwaahịa. board.It na -ntekwasa otu side.it dabara maka ime igbe nkwakọ ngwaahịa nri grammage zuru oke bụ 210g, 220g, 230g, 250g, 270g, 300g, 330g, 350g. nnukwu efere, ihe mkpuchi nri, nkwakọba ihe ọEụ.ụ.EU1935/2004 (Iwu EU maka ihe na isiokwu ezubere ịbata nri).
LIQUID Mpempe akwụkwọ/LPB
Mpempe akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa mmiri /LPB bụ ụdị mkpuchi ejiri kpuchie ya.Ọ bụ akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa adịchaghị nke emere site na akwụkwọ ọkwa nri.Ọ bụ ngwaahịa buru ibu. Ọkpụrụkpụ ọzọ na isi ike site na grammage dị ala. adabara maka ịkwakọ ngwaahịa mmiri ara ehi dị ka mmiri ara ehi na ihe ọ juiceụ..ụ. , igbe ihe ọ andụ andụ na ihe ọ wraụ foodụ a fụkọtara.